डा. केसीको मागमा अनौपचारिक सहमति भएको दावी : नेम्वाङ
अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग संबोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अनौपचारिक सहमति भएको दावी गरिएको छ ।
केसी र सरकारबीच सहजीकरण गरिरहेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, केदारभक्त माथेमा, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा, त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी डा. दिव्यासिंह शाहसहितको टोली र प्रधानमन्त्रीबीच केसीको मागको विषयमा बुधबार छलफल भएको थियो ।
छलफलमा केसीको मागको विषयमा अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको नेम्वाङले बताएका छन् ।
नेम्वाङले संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता नहुने तर डा. केसीको वार्ता टोलीले मंगलबार दिएको लिखित सुझावहरु समेट्ने बताएका छन् । बुधबार केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता हुँदैछ ।
Posted on July 25, 2018 Author Categories राजनीति, समाचार
Previous Previous post: ड्रोन क्यामरा उडाउँदा ७ जना पक्राउ
Next Next post: ट्याक्सीले यात्रुलाई ठगेको गुनासो